DAAWO VIDEO:Puntland oo Ku Dhawaaqday Xiliga Sool Dagaal Ku Qaadayso Xuduuda Soo Xirayso
June 22, 2018 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 6
Shirka Xasaasiga Ahaa ee Golaha Wasiirada Puntland Ayaa Looga Hadlay dagaalka Soomaliland iyo Puntland Waxaana Laga Soo saaray Qodobo Salka Ku haya Dagaalka Gobolka Sool,Puntland Ayaa Sheegtay Inay Xadkeeda Si Buuxda Gacanta Ugu Dhigayso.
Shacabka Puntland Ayey Ugu Baaqday Puntland Isgarab taagaan Ciidamada Difaaca oo Ay Bixiyaan Wixii Qof kasta uu Awoodo Iyadoo Ciidamada Difaaca Lagu Tageerayo Xoolaha iyo Cunada.
Waxa igu maqaalo ah inay budhlayn dagaalka dib ugu dhigtay koobka aduunka ee ruushka kasocda.
Kadib marka koobka aduunka laso gebegebeyo ayaanu dagaal qaadi,hadii aanan markale dib ugu dhigin intuu ka dhamaanayo mooshinka xajku.
MACNAHA SAXDA AH EE “JEEGAAN”
Dad badan baa la dawakhsan sababta uu cabqariga Habar Yoonis fallaagada Habar Awal iyo Habar Jeclo “jeegaanta” oogu naaneysay maadaama ay jeegaantu tahay shay aad u qurux badan. Haddaba macnaha dhabta ah ee uu uga gol lahaa ma ahayn amaan uu ku wiiqay ee waxuu ahaa sidan.
Sida aynu ogsoonnahay jeegaanta waxaa kale oo loo yaqaannaa ‘qaansa roobaad’. Sida caadiga ahi qaansa roobaadku haba qurux badnaato ee ma aha wax marka ay curato sii joogta oo dhakhso ayay u libidhaa. Muddo aad u gaaban ayay dadka u muuqataa. Waxaa kale oo jira in roobka ay jeegaantu curiso aanu naq ba ahayn. Waa wax dhakhsadii ba baabba’a. Macnaha loo la jeeday waa kan ee ah in “Somaliland” aanay xaqiiqo ahayn ee ay tahay uun wax dadka aaminay loo qurxiyay aan se jirin oo muddo ka dib iska baabbi’i doona.
Waxaa la macne ah been la sibbaaqay ee dadka rumeystay maankooda lagu qalday maadaama ay maqalkeda ku raaxeysanayaan. Jeegantu haddaba waa khayaal la qurxiyay ee aan dhab ahayn. Kuwa ka daba waashay na kollay dhimirka ayay ka curyaaman yihiin waayo dadka saaxiga ahi way dhaadsan yihiin in aanay qaansa roobaadku sii waari doonin.
Well illustrated well depicted and always as usual well said.
waad qeexday alaylehe inkastoo in mudo ah aan meeshaan ka naadiyey cid ii balbalaarisa micnaha kalmada jeegaan sababo la xiriira kalmadoo ah kalmad reer waqooyi luuqadaasna xoogaa la iiga fara dhuuban yahay. waxaan intaas ku darayaa in mudadaas aan raadinayey micnaha dhabta ah ee jeegaan aan u qaatay in dadka reer harti ee ku dura kalmada iidoor ay yihiin dad maangaaba oo iyagoo is leh dura oo wax ka shega misna amaanaya waayo qaanso roobaad waa wax leh muuq soo jiidasho leh midabada kala duwan daraadood hadii laguugu wacana waxaan u qaatay amaan heer sare ah “despite the definition that you have just left behind”
dhanka kale nimanka iidoor khaas ahaan ninka aad warmaha colaada aad is dartaan ee axmed khaldaan iyo jaalayaashiisa sida somalilander io saalax waxay aamin san yihiin arin kale oo bataatanba ka duwan sida aad u qeexday kalmada. waxay aamin san yihiin in wareega ay wareegsan tahay qaansadu daraadeed ay labada cirif iskaga soo dhawaato, halkaan waxay ka cabirayaan in beesha siilaanyo oo iyadu geed dheer iyo mid gaabanba u kora sidii habar yoonis looga hor istaagi lahaa hogaanka dalka ay cirifka lasoo aaday beesha biixi. hadaba labada beelood xuduud ma leh oo waa loo dhexeeyaa ha yeeshee ciifyadii baa isu dhawaada
yaraantaydii baan maqlijiray
bidix ka dhow midig ka dhowawaada
Aad baad u mahadsan tahay marka hore oo waxaan is lahaa dadka ha kaga hor dhicin macnaha naaneystan ku duugan. Waa marka labaad ee Libaaxa Mudugoow marka aynu labadeenu isu jiibino qoladan aad carrabbawday sida Ahmed Cudbi waxay noqdaan bisado ka gabbanaya diryaanka laba aar oo Sanaag iyo Mudug jibaadka isugu jiibinaya. “sOmalilander” iyo “Xaaji Saalax” waa isla shakhsigoo meeshan cantarabaqashka isugu camira ee ma aha labo qofood.
Ahmed Cudbi isagu arrimaha jira kama hadli yaqaanno oo afkaar u gaar ah na ma dhiiban karo. Ruux uu shakhsiyaddiisa hawraar haweeneed ku hawaawiro ayuu itaalkiisu ku soo koobmay. Billawgii hore nin adag ayuu ii la ekaa laakiin markii aynu daaqadda kala baxnay ayuu isku dhex yaacay oo caay iyo wax saar ayay kaga soo hadhay. He is incapable of engaging real men in a mature debate and logical thinking.
Dad maqnaa iyo damaraa yimi
Salaan guud asxaabta marqaan lntiina ku cusub iyo inta magacan hore uhalacsatayba
Caawa salaanta ayaan ku gaabsanayaa maadaama garoomada ciyaaraha mudo dheer ka maqnaa amintuna aakhirul leyl tahay